Maalmahan Nicaragua waxay ku shaqeyneysaa 80% kaliya la cusbooneysiin karo | Cusbooneysiinta Cagaaran
Cusbooneysiinta ayaa siineysa in kabadan 80% tamarta Nicaragua
Tomàs Bigordà | | Biyomareenka, Awoodda dabaysha, Tamar-dhuleedka, tamarta Haydarooliga, Tamarta Qoraxda Photovoltaic, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Jiilka korontada ee leh ilo dib loo cusboonaysiin karo ee Nicaragua wuxuu kudhowaad yahay 53% wadarta guud, laakiin sanadkan, sida uu sheegay Wasiirka Tamarta iyo Macdanta (MEN) Salvador Mansell, waxaa jira maalmo dhowr ah oo ilahaani ay bixiyeen shabakada. hasta un 84% ee tamarta laga isticmaalo dalka.
Tan macnaheedu waxaa weeye, sida ay dowladdu leedahay, awoodda weyn ee dalku ku dhex leeyahay nadiifi tamarta. Wasiirka Ragga ayaa faallo ka bixiyay in bilaha sida Nofeembar, Abriil ama Maarso, marka waddanku leeyahay dabeylo xoog leh, dhammaan beeraha dabaysha ay ka shaqeeyaan 100%, marka lagu daro tabarucaadka dhirta korontada laga dhaliyo, jiilka ayaa gaaraya qiyaastii 84% oo leh ilo dib loo cusboonaysiin karo.
Mansell wuxuu intaas ku daray “Marka xaaladuhu fiicnaadaan ilaha la cusboonaysiin karo si ay u soo saaraan, waxaa mudnaanta la siiyaa hawl maalmeedka nidaamka waana muhiim u ah maaraynta suuqa. Dalka gudihiisa waxaan uga faa'iideysaneynaa kheyraadka dabiiciga ah ".
Xaqiiqdii, Mansell meesha kama saarin in sannadkan ay jiraan maalmo ay suurtagal tahay in lagu gaaro sare u kac ka sarreeya 85% jiilka oo leh ilo nadiif ah, in kasta oo uu ku adkaystay in dhowr ay tahay in la buuxiyo xaaladaha cimilada si loo gaaro rikoorkaas cusub. Intaa waxaa dheer, in 2017 warshad cusub oo 12 megawatt qorraxda ah ayaa laga furay qaybta Puerto Sandino.
Sida laga soo xigtay dowladda: “Waxaan leenahay jiil kuleyl ah, laakiin waa inaan taageerno, marka dhibaato jirto, marka dabeyl la waayo, roob la waayo, dhibaatooyin ayaa ka jira qeybta qoraxda, markaa waxaan heysanaa keydinta kuleylka si loo sii wado adeegga tamarta ee dadweynaha ”.
2016 waxaa lagu xiray 53% jiil xasilloon leh ilo dib loo cusbooneysiin karo iyo ujeeddada hay'adaha ayaa ah in la kordhiyo tiradan.
1 Tixraaca Dunida
2 Tamarta dabaysha ee Nicaragua
3 Kala duwanaanta ilaha
4 Maalgashiga shisheeye
Xaqiiqdii, Nicaragua waxay sii wadaa inay tusaale u noqoto soo saarista tamarta korantada oo leh ilo dib loo cusboonaysiin karo. Dhawaan, aasaaska Mashruuca Xaqiiqda Cimilada - oo uu aasaasay 2006 madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka, Al Gore - wuxuu u aqoonsaday waddanku inuu yahay saddexda quruumood, oo ay weheliyaan Sweden iyo Costa Rica, kuwaas oo dejinaya wadadii loo mari lahaa arimahan aduunka oo dhan, taas oo ah wadada ugu weyn ee lagu dhimi karo qiiqa gaaska aqalka.
Mana ahan wax ka yar. 27.5% ee matalay jiilka tamarta dib loo cusboonaysiin karo 2007, waxay aadeen 52% sanadka 2014, iyo 53% sanadka 2016. Himilada weyn ee Dowladdu waa inay gaarto 90% sanadka 2020, oo leh mashaariic maalgashi oo dawladeed, kuwa gaar loo leeyahay iyo kuwo isku dhafan. Intii u dhaxeysay 2007 iyo 2013 oo kaliya, dabaysha, biomass, korontada iyo qoraxda ayaa 180km oo dheeri ah siisay shabakada qaybinta korontada ee dalka, taas oo maalin kasta ay leedahay baahi dhan 550 megawat.
Tamarta dabaysha ee Nicaragua
Sidaan kor kusoo sheegnay, Nidaamka Iskuxirka Qaranka (SIN) wuxuu diiwaan galiyay in sanadkii 2016, boqolleyda dhalinta korantada oo leh ilo dib loo cusboonaysiin karo ay gaareen 53%. Ku dhirta tamarta dabaysha Waxay matalayeen 31%, dhirta geothermal 28.6%, dhirta korantada laga dhaliyo 26.8% iyo warshadleyda sokorta 13.6%.
Marka laga hadlayo tamarta dabaysha, mashaariicda ugu badan ee dalka wakiil looga yahay waa Amayo I iyo II oo ku yaal waaxda Rivas waxaana hagaya daladda Kanada ee Amayo SA, oo soo saarta qiyaastii 63 megawaat.
Sannadkan, tabarucaadda warshad sawir leh taas oo ku taal Puerto Sandino, waqtigan xaadirka ah waa mida kaliya ee dhalisa tamarta qoraxda ee shabakada qaybinta dalka.
Xaqiiqdii, tamarta qorraxda aad ayey uga jirtaa dalka, laakiin wax badan ayey u tahay jiil shaqsiyeed.
Dhamaadka sanadkaan, dowlada waxay hiigsaneysaa inay gaarto 94% korantada dhulka qaranka. "Anagoo ka duulayna qorshayaasha iyo geedi socodka la soo saaray, hadafkeenu waa in la gaaro 2021% caymiska korantada sanadka 99," ayuu yiri Mansell.
Kala duwanaanta ilaha
Waddanku wuxuu leeyahay Tumarín hydroelectric macroproject, kaas oo ka socda horumarka koonfurta Caribbean-ka ee Nicaragua, sida lagu saadaalinayo. bixin doonaa 253 megawatts, mar hadii ay shaqadeeda bilaabaneyso dhamaadka sanadka 2019.
César Zamora, maareeyaha dalka ee shirkadda tamarta ee IC Power, wuxuu tilmaamay in ay ka go'antahay Nicaragua tamar nadiif ah xal u noqday dhibaatadii koronto la’aan soo foodsaartay dalka kahor 2007.
"Sharciga Dhiirrigelinta Jiilka Korantada oo laga helo ilo dib loo cusbooneysiin karo ayaa la soo jeediyay oo dowladda cusub (2007, Daniel Ortega) wuxuu wadahadal la bilaabay wakiillada waaxda tamarta iyo Cosep (Superior Council of Private Enterprise) si loo qorsheeyo sida looga baxo dhibaatadaas, ”ayuu dib u xusuustay.
Zamora wuxuu xusay inay suurtagal noqotay in 180 megawaat oo tamar dabayl ah lagu mudo shabakada qaybinta, 70 megawaat oo tamar-dhuleedka laga bilaabo dhismaha San Jacinto-Tizate, 50 megawatts oo ah tamarta korantada laga dhaliyo mashaariicda Larreynaga (gobolka), Hidropantasma iyo El Diamante, oo hawlgalay bishii Diseembar ee la soo dhaafay, halka ay ku jireen biomass Warshad leh 30 megawaat iyo Santa Rosa iyo San Antonio milkiilayaasha sonkorta, oo 80 megawatts u dhaxeysa, ayaa howl galay.
Jahosca López, isku duwaha xafiiska Ururka Cusbooneysiinta Nicaraguan, kobaca weyn ee dalka ee waaxdan waxaa sabab u ah siyaasadaha ay Dowladdu u dallacsiisay dhiirigelinta maalgashi qaran iyo mid shisheeye, gaar ahaan Sharciga Dhiirrigelinta Koronto dhalinta oo laga helayo ilo dib loo cusboonaysiin karo.
Bishii Juun 2015, ayaa sheegay in sharciga uu wax ka beddelay Golaha Shacbiga si loo kordhiyo dhiirigelinta mashaariicda cusub ee tamarta la cusboonaysiin karo muddo saddex sano ah oo dheeri ah.
Mid ka mid ah doodaha ay ka dhiibteen munaasabadaas sharci dejiyeyaashu waxay ahayd iyadoo dalku isbedelayo matrixkiisa tamarta canshuurta korontada ayaa la dhimay.
Isku-duwaha ayaa sidoo kale iftiimiyay in horumarka tikniyoolajiyadda ay saameyn ku yeelatay, taasoo u oggolaatay sameynta iyo fulinta mashaariicda a waxtar badan, marka lagu daro kor u qaadista horumarka bulshada ee bulshooyinka qaarkood iyadoo diirada la saarayo deegaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Cusbooneysiinta ayaa siineysa in kabadan 80% tamarta Nicaragua
Sababaha iyo cawaaqibta wasakhda carrada
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo ayaa gaari doonta gaadiidka dadweynaha